बलिउडकी हाँस्य क्वीन् भारती आमा बन्दै – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/बलिउडकी हाँस्य क्वीन् भारती आमा बन्दै
बलिउडकी हाँस्य क्वीन् भारती आमा बन्दै
बलिउडकी हाँस्य क्वी’न् भारती सिंह र उ’नका पति हर्ष लिम्बाचि’याको घरमा खुशीया’ली आउने भएको छ । यो खुशि’याली अरु अरु’भन्दा निकै नै ठुलो र महत्व’पुर्ण छ । किनभने भा’रती आमा बन्ने भ’एकी छन् । यस का’रण भार’ती र हषै चाँडै नै बन्दैछन् आफ्नो बच्चा’को अभि’भावक ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आफु क्युट एउटी परी’की आमा बन्न चा’हेको कुरा भार’तीले नेशनल टेलिभि’जनमा गरिन् खुला’सा । भारतीले यो कु’राको खु’लासा एउटा रिया’लिटी कार्यक्र’ममा गरेकी हुन् । जहाँ उनका पति हर्ष पनि’संगै नै थिए । यी दुवैले एउटा रिया’लिटी सोलाई यतिबेला होस्ट ग’रिरहेका छन्।
सोही कार्य’क्रम स’ञ्चालन गर्ने क्र’ममा भारती र हर्षले एउटा रोमान्टी गीतमा आफ्नो परर्फ’मेन्स दिएका थिए । उक्त गी’तमा उनीहरुको डा’न्स सकिएपछि भारतीले आफ्नो हात’मा रहेको प्रप’लाई देखाउँदै भनेकी थिईन्,‘अहिले त मेरो हा’तमा यो डमी छ ।
तर २०२१ मा भने मेरो र ह’र्षको रियल बेबी मेरो हा’तमा हुनेछ ।’ उनले अगा’डी भनिन्,‘यदि अर्को पटकको शो हामीले नै होस्ट गर्ने मौ’का पायौं भने सायद त्य’तिबेला हाम्रो हा’तमा डमी’को साटो आफ्नै बेबी हुनेछ ।
भारती’को यो कुरामा समर्थन जना’उँदै हर्षले पनि आफ्नो पहिलो सन्ता’नको रुपमा छोरी नै भ’एको ईच्छा व्यक्त गरेका थिए । भारती र हर्ष’को यो कुरा सुनेर सबैले भा’रती आमा बन्दै छिन् भन्ने कुरा’को सजिलै अनुमान लगा’एका थिए । र उनीह’रुलाई शुभ’कामना पनि व्यक्त गरेका थिए ।
आज विश्वकै अग्लो भवनमा नेपालको झण्डा झलमलाउदै !
सामाजिक संजालमा आलाेचित बनेकी वर्षाको समर्थनमा रिमा : बचाउमा के भनिन् ?
फेरि काठमाडौँका सडक, पसल बन्द गर्ने निर्णय
भारतबाट नेपाल आइ १४ दिन क्‍वारेन्टाइन बसेका पुरुषको पोखरामा निधन